Ezigbo ngere na-eme ezi agbataobi ... | Law and More BV
blog » Ezigbo fences na-eme ezigbo ndị agbata obi - mmeghachi omume gọọmentị na cybercrime yana mmepe nke teknụzụ na Internetntanetị
Ezigbo fences na-eme ezigbo ndị agbata obi - mmeghachi omume gọọmentị na cybercrime yana mmepe nke teknụzụ na Internetntanetị
Probablyfọdụ n'ime unu matara na dịka ihe omume ntụrụndụ m na-ebipụta akwụkwọ na ntụgharị site n'asụsụ Eastern European gaa bekee na Dutch - http://www.glagoslav.com. Otu n'ime akwụkwọ m bipụtara n'oge na-adịbeghị anya bụ akwụkwọ nke ọkaibe onye ọka iwu Russia Anatoly Kucherena dere, onye na-ekpe ikpe ikpe Snowden na Russia. Onye dere akwụkwọ edeela akwụkwọ banyere ezi akụkọ nke onye ahịa ya bụ Edward Snowden - Oge nke Octopus, nke bụrụlarị ihe ndabere maka edemede nke ihe nkiri Hollywood e wepụtara n’oge na-adịbeghị anya “Snowden” nke Oliver Stone onye isi ihe nkiri a ma ama na United States duziri.
Emere ka Edward Snowden mara ebe nile dị ka onye na-eme mkpọtụ, na-ewere ọtụtụ ozi nzuzo na "ọrụ nzuzo" nke CIA, NSA na GCHQ. Ihe nkiri n'etiti ndị ọzọ gosipụtara iji 'PRISM', nke ndị NSA nwere ike igbochi nkwukọrịta ọnụ ọgụgụ buru ibu na enweghị mbido, ikike mmadụ n'otu n'otu. Ọtụtụ ndị mmadụ ga na-ahụ ihe ndị a dị anya ma kọwaa ha dị ka ihe ngosi nke ihe nkiri America. Eziokwu anyị bi n'ime ya na-egosi ihe megidere. Ihe ọtụtụ ndị amaghị bụ na ọnọdụ yiri nke a na-eme ọtụtụ mgbe karịa ka ị chere. Ọbụna na Netherlands. Nke a pụtara na Disemba 20, 2016 ndị ụlọ omebe iwu Dutch gafere ụgwọ nleba anya nzuzo nke “Computercriminaliteit III” (“Cybercrime III”).
Kọmitii nke III
Computergwọ Computercriminaliteit III, nke chọrọ ka ndị ụlọ omebe iwu Dutch na-ekwu maka ya na ọtụtụ ndị na-ekpelarịrị ekpere maka ọdịda ya, a ga-enye ndị ọrụ nyocha (ndị uwe ojii, Royal Constabulary na ọbụna ndị isi nyocha pụrụ iche dị ka FIOD) ikike ichoputa (i copyomi, lelee, oge ihe na emeghi ozi banyere) 'ihe eji eme ya onwe ya' ma obu 'komputa eji eme ya (maka igwe mmadu: komputa na igwe ekwenti) iji choputa ihe ojoo. Dịka gọọmentị siri gosipụta na ọ dị mkpa inye ndị ọrụ nyocha nyocha ịchọrọ - ibanye n'ezoghị ọnụ maka ụmụ amaala ya ka oge a na - eme ka mpụ bụrụ ihe siri ike ịchọpụta n'ihi ịba ụba dijitalụ na izo ya ezo. Nkọwa ahụ akọwapụtara na ụgwọ ahụ, nke bụ nnukwu akwụkwọ ọgụgụ siri ike dị peeji 114, kọwara ebumnuche ise nke enwere ike iji nyocha nyocha:
Mwube na ijide ụfọdụ nkọwa nke ngwaọrụ kọmputa ma ọ bụ nke onye ọrụ ahụ, dị ka njirimara ma ọ bụ ọnọdụ: karịchaa, nke a pụtara na ndị ọrụ nyocha nwere ike ịbanye na kọmputa, ndị na-anya ụgbọ ala na ekwentị iji nweta ozi dịka adreesị IP ma ọ bụ nọmba IMEI.
Ndekọ nke data echekwara na ngwaọrụ kọmputa: ndị ọrụ nyocha nyocha nwere ike idekọ data achọrọ iji wee 'guzobe eziokwu' ma dozie oke mpụ. Otu nwere ike iche maka idekọ onyonyo nke ụmụaka na nkọwapụta nbanye maka obodo emechiri emechi.
Ime data enweghi ike ị nweta: ọ ga - ekwe omume ịme data nke mere mpụ ahụ enweghị ike iji kwụsị mpụ ma ọ bụ gbochie mpụ ndị ga - eme n'ọdịnihu. Dabere na akwụkwọ nkọwa, ọ kwesịrị n'ụzọ dị otu a ịlụ ọgụ botnets.
Ogbenye nke nyere ikike maka mgbochi na ndekọ nke nkwukọrịta (nzuzo): n'okpuru ọnọdụ ụfọdụ ọ ga-ekwe omume igbochi ma dekọ ozi (nzuzo) na ma ọ bụ na-enweghị nkwado nke onye na-eweta ọrụ nkwukọrịta.
Ogbenye nke akwụkwọ ikike maka ịchekwa usoro: ndị ọrụ nyocha ahụ ga-enweta ike iji guzobe ọnọdụ ma soro mmegharị nke onye a na-enyo enyo, ikekwe site na ịwụnye ngwanrọ pụrụ iche na ngwaọrụ kọmputa.
Ndi mmadu kwenyere na a ga-eji ike ndị a mee ihe maka cybercrime ga-akụ afọ n'ala. Ike nyocha nyocha dị ka esi kwuo n'okpuru isi abụọ na nke ikpeazụ dị ka akọwara n'elu, enwere ike itinye aka na ikpe gbasara mpụ nke emere ka ejidere mmadụ nwa oge, na-agbadata mpụ ndị iwu ahụ setịpụrụ opekata mpe nke afọ 4. Ike ichoputa nke ejikọtara na ebumnobi nke abụọ na nke atọ nwere ike iji ya mee ihe gbasara mmebi iwu nke iwu setịpụrụ opekata mpe afọ 8. Na mgbakwunye, usoro izugbe dị na kansụl nwere ike igosipụta mpụ, nke a na-eme site na iji arụmọrụ akpaghị aka nke ọ bụ ihe dị mkpa na-elekọta mmadụ na ọ kwụsịrị mpụ ahụ ma kpee ndị na-eme ihe ikpe. Ọ dabara nke ọma, ịbanye na arụmọrụ akpaka nwere ike ikwe ike ma ọ bụrụ na onye a na-enyo enyo na-eji ngwaọrụ ahụ.
Dika ejiri ezigbo ebumnuche mechie uzo ibanye na hel, ilekota ya anya abughi ihe ekwesighi. Enwere ike iji nyocha ihe enyere ụgwọ site na ụgwọ ahụ, mana arịrịọ maka itinye ụdị ihe eji arụ ọrụ a nwere ike ịme naanị onye ọka iwu. Nkwado ikike nke onye ọka ikpe na - ahụ maka ọrụ yana "Centrale Toetsingscommissie" nke Ngalaba Mkpesa Ọha na-enyocha atụmatụ iji ngwaọrụ ahụ. Na mgbakwunye, yana ekwuru na mbụ, enwere mgbochi zuru oke na itinye ikike nke ime mpụ na opekata mpe afọ anọ ma ọ bụ asatọ. N'ọnọdụ ọ bụla, achọrọ maka ịkpa oke na enyemaka dị mkpa, yana ihe nnabata na usoro chọrọ.
Velzọ ndị ọzọ
A tụlere akụkụ kachasị mkpa nke ụgwọ ahụ Computercriminaliteit III ugbu a. Aghọtala m na ọtụtụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi, na mkpu enyemaka ha, na-echezọ ịkọ isiokwu abụọ dị mkpa nke ụgwọ ahụ. Nke mbu bu na ego a g’egosiputa omume iji ‘bait umu aka’ iji choo ndi ‘ahia’. Enwere ike ịhụ ndị ahịa dịka ụdị dijitalụ nke ụmụ nwoke hụrụ n'anya; na-enyocha mmekọrịta nwoke na nwanyị ụmụaka. Ọzọkwa, ọ ga-adịrị ya mfe ikpe ndị natara data zuru ohi na ndị na-ere wayo na-ezere inyefe ngwongwo ma ọ bụ ọrụ ha na-enye n'ịntanetị.
Ihe mgbochi megide ụgwọ Computercriminaliteit III
Iwu ahụ a tụrụ aro nwere ike ịwakpo nnukwu nnabata na nzuzo nke ụmụ amaala Dutch. Iwu dị obosara na-enweghị obosara. Enwere m ike iche maka ọtụtụ ihe mgbochi, nhọrọ nke gụnyere eziokwu ahụ bụ na mgbe ị na-elele mmachi na mmejọ na opekata mpe afọ 4, mmadụ ga-ewere ozugbo na nke a na-anọchi anya oke ezi uche dị na ya na ọ ga-emetụta mmejọ mgbe niile enweghị nchegharị siri ike. Agbanyeghị, mmadụ nke kpachaara anya banye na alụmdi na nwunye nke abụọ ma jụ ịgwa ndị otu ahụ, a ga-amarịrị onye ahụ ikpe afọ 6. Ọzọkwa, ọ nwere ike bụrụ ikpe na onye na-enyo enyo na-emesị bụrụ onye aka ya dị ọcha. Ọbụghị naanị nkọwa nke ya ka enyochaala nke ọma, mana o nwekwara ike ịbụ nkọwa nke ndị ọzọ na-enweghị ihe gbasara ya na mpụ emeghị eme. E kwuwerị, a na-eji kọmputa na ekwentị 'par kacha mma' kpọtụrụ ndị enyi, ezinụlọ, ndị were gị n'ọrụ na ndị ọzọ na-enweghị ọnụ. Na mgbakwunye, a na-enyo enyo ma ndị na-ahụ maka nnwapụta na nlekọta nke arịrịọ dabere na ụgwọ ahụ nwere ihe ọmụma pụrụ iche iji kwenye arịrịọ ahụ. Ma, iwu dị otú a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọjọọ dị mkpa n'oge a. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla nwere nsogbu ịntanetị na esemokwu na-enwekarị nnukwu nsogbu mgbe mmadụ zụtara tiketi ịgba egwu adịgboroja na ahịa ịntanetị. Ọzọkwa, ọ dịghị onye ga-enwe olileanya na nwa ya ga-agakwuru onye nwere ọnụ ahịa oge ọ na-achọgharị kwa ụbọchị. Ajuju a ka di na akwukwo Computercriminaliteit III, ya na otutu ohere, bu uzo aga aga.
Computergwọ Computercriminaliteit nke III yiri ka ọ bụụrụ ihe arụ dịtụ mkpa. Thegwọ ahụ na-enye ndị isi nyocha ọtụtụ ikike iji nweta ọrụ nke ndị na-enyo enyo enyo. N'adịghị ka ikpe n'okwu ikpe Snowden, ụgwọ ahụ na-enye nchedo nke ukwuu. Agbanyeghị, a ka na-enyo enyo ma ihe nchekwa ndị a ezuola iji zere itinye ihe nzuzo nke ụmụ amaala Dutch na ọnọdụ kachasị njọ iji gbochie “Snowden 2.0” - ihe ga-eme.
Previous Post Dutchlọikpe Kasị Elu nke Dutch na-enye nkọwa doro anya ma kpebie…
Next Post Mkpesa nkịtị na ụwa iwu bụ na ndị ọka iwu n'ozuzu ha na-ejikarị nghọta ...